ဆိုင်တာဝန်ခံ Archives - Glory Assumption Space
1.ဆိုင်တာဝန်ခံ - Male (15) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ သာကေတမြို့ နယ်။
Location in : Thar Kay Ta
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။(ဘာသာခြား Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ 1.ဆိုင်တာဝန်ခံ - Male (15) Posts / လစာ- ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ သာကေတမြို့ နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၃) နှစ် မှ (၄၀) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ - အဆောင်နေနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - စာရင်းပိုင်းအခြေခံနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ - စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူ၊ ကွန်ပျူတာရသူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
ဆိုင်တာဝန်ခံ - Male (10) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / သာကေတမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ (တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။) (ဘာသာခြား Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
1.ဆိုင်တာဝန်ခံ - Male (10) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / သာကေတမြို့နယ်။
- အသက် (၂၇ မှ ၃၇) နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။
-စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ရသူဦးစားပေးမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
1. တွဲဖက်ဆိုင်တာဝန်ခံ - Male (5) post / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /သာကေတမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။(ဘာသာခြား Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
တွဲဖက်ဆိုင်တာဝန်ခံ - Male (5) post / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /သာကေတမြို့ နယ်။
BcSc (Computer )ဘွဲ့ရ (သို့ ) ဘွဲ့ တစ်ခုခုရပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ အဆောင်နေနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အလုပ်ချိန် မနက် (၈:၀၀) ည (၈:၀၀) လုပ်နိုင်ရမည်။ အသက် (၂၃) နှစ် မှ (၃၀) နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ စာရင်းပိုင်းအခြေခံနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူ၊ ကွန်ပျူတာရသူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
ဆိုင်တာဝန်ခံ - Male (10)Posts
Salary Rang : 200000 - 300000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Restaurant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. ဆိုင်တာဝန်ခံ - Male (10)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် +ရက်မှန်ကြေး/သာကေတမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) မှ (၄၀) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်သန့်ပြန်သူဖြစ်ရမည်။ - ဆိုင်တာဝန်ခံ အတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ - အဆောင်နေနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာ၊အင်္ဂလိပ်စာရရှိသူဦးစားပေးမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )